Dowladda Soomaaliya ayaa Faahfaahin ka bixisay Halka uu maraayo howlgalka Xasilinta caasimadda Soomaaliya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya ayaa Faahfaahin ka bixisay Halka uu maraayo howlgalka Xasilinta caasimadda...
Dowladda Soomaaliya ayaa Faahfaahin ka bixisay Halka uu maraayo howlgalka Xasilinta caasimadda Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Eng C/raxmaan Yariisow oo ka hadlay howlgalka Xasilinta Caasimadda ayaa sheegay in la diyaariyey Ciidamo 1500 oo askari oo isku dhaf ah oo isugu jiro Boolis , Nabadsugid iyo weliba Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in dowladaan ay tahay Dowladd ay leeyihiin Shacabka Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in howlgalka Xasilinta Caasimadda in uu ka dhashay codsiga iyo rabitaanka Shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in la nabadeeyo Caasimadda iyo guud ahaan Dalka.
Eng Yariisow ayaa sheegay in ay jiraan dad yar oo ka biya diidsan in la qaado hubka waaweyn waxaana uu xusay in aan dhag jalaq loo siin doonin isla markaana go’aan ay ka tahay Dowladda Soomaaliya aruurinta hubka Waaweyn si loo xasiliyo Caasimadda iyo Guud ahaan Goboladda Dalka.
Previous articleDharkeynleey oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Next articleFaahfaahin Dheeri ah oo ka soo baxayo weerarkii ka dhacay London.